भर्खरै - Page2of 74 - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
भक्तबहादुर शाही - April 16, 2021
भक्तबहादुर शाही - April 15, 2021
जसपाले सरकारलाई बुझायो मुद्दा र बन्दीको विवरण
भक्तबहादुर शाही - April 7, 2021 0
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मधेश आन्दोलनका क्रममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दा र बन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय पठाएको छ । सत्ता समीकरणका...
पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान जारी छ । बिहान ९ बजेदेखि देशैभर मतदान सुरु भएको हो । केन्द्र, प्रदेश र...
निजामती सेवा विधेयक विवादित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा सोमबार पेस संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादित बनेको छ । विधेयकमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचकै...
कर्णाली प्रदेश सरकारका ३ मन्त्रीले दिए राजीनामा
भक्तबहादुर शाही - April 6, 2021 0
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका ३ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । पार्टीको संसदीय दलले दिएको निर्देशन पालना गर्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्...
संघीयता सबल बनाउन दसवर्षे रोडम्याप भोलिबाट कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्नेगरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप) भोलि बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । संघीयता सफल र कार्यान्वयन पक्ष...
बर्दिया निकुञ्जमा लागेको डढेलोकाे धुँवाले बस्ती ढपक्कै
भक्तबहादुर शाही - April 5, 2021 0
बर्दिया । डढेलोको धुँवाले एक साता यता यहाँका बस्ती ढपक्कै ढाकिएका छन् । धुँवाले बस्ती ढाकिदा यहाँका बासीन्दालाई निकै सकस भएको छ । धुँवा...
काठमाडौं संसारकै एक नम्बर दूषित शहर
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वकै वायु प्रदूषित शहरको सूचीमा १ नम्बरमा परेको छ। आज काठमाडौंको वायु प्रदूषण ३०९ एक्युआई पुगेको छ। यो अवस्था स्वास्थ्यका लागि...
तीन व्यापारिक फर्ममाथि अदालतमा मुद्दा दायर
वीरगञ्ज । गु्णस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जले बारा र पर्साका तीन व्यापारीक फर्ममाथि नापतौल कसुर सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । कार्यालयले राजश्व चुहावट गरेको,...
भारतमा कोरोना बढ्दा नेपाल उच्च जोखिममा
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार केही दिनयता संक्रमितको संख्या दैनिक १ सय ५० माथि थपिने...
भक्तबहादुर शाही - April 4, 2021 0
काठमाडौँ । भक्तपुर नगरपालिकाले नेपालको संविधान विपरित आफ्नाे कानुन निर्माण गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ को उपधारा (१) को (ङ)...
नयाँ सरकार गठनको अन्योल उस्तै
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प दिने विषयमा स्पष्ट देखिए पनि कसरी र कुन प्रक्रियाबाट सरकारको...
राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न : प्रधानमन्त्री
भक्तबहादुर शाही - April 3, 2021 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को गणितले देशको आवश्यकताको प्रतिनिधित्व नगरे ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शनिबार शुभारम्भ...
खोसियो ६ जिल्लाका नेपाल पक्ष अध्यक्षको जिम्मेवारी
धनगढी । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ जिल्लाका माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका जिल्ला कमिटीका अध्यक्षलाई हटाएको छ । नौ जिल्ला...
विवादका बीच कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको छ । शुक्रबार राति अबेर बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले...
युवतीलाई रंग दलेको विषयमा झगडा परेपछि भिरबाट धकेलेर मारिएका थिए दुई युवा
भक्तबहादुर शाही - April 2, 2021 0
बागलुङ । दुई युवालाई भिरबाट धकेलेर हत्या गरेको आरोपमा बागलुङको वडिगाड–१० दर्लिङका आठ युवा पक्राउ परेका छन् । होली खेल्ने क्रममा झडप हुँदा दुई जनालाई...
सरकारी अस्पतालप्रति अविश्वास बढ्दो
काठमाडौं । सरकारी अस्पतालले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा निजीमा धाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संसदीय समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । संसद्को शिक्षा तथा...
हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै फिर्ता
काठमाडौं । काठमाडौंको बानेश्वर तथा अनामनगर क्षेत्रको धोबीखोलामा विभिन्न व्यक्तिद्वारा हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै सरकारको नाममा ल्याइने भएको छ । भूमिव्यवस्था सहकारी...
भक्तबहादुर शाही - April 1, 2021 0
आजबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा बस्ने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आजबाट सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ । झन्डै डेढ वर्षपछि सिंहदरबारमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको हो । यसअघि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा...
काठमाडौं । आमनागरिकको हेलचेक्रयाइ र सरकारको पूर्वतयारी फितलो हुँदै जा“दा ‘कोरोना ग्राफ’ उकालो लाग्दै गरेको पाइएको छ । मुख्यतः जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा र...
भक्तबहादुर शाही - March 31, 2021 0
रामेछाप । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नं. ३ विरौटामा बस्दै आएका मेहरमान बिकको छिमेकीको कुटपिटबाट मृत्यु भएपछि परिवार नै विस्थापित भएको छ । स्थानीय...
प्रधानमन्त्री ओली स्पष्ट भएकाले हामी साथमा: ठाकुर
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्य नेताभन्दा बढी स्पष्ट भएकाले आफूहरू उनको पक्षमा रहेको बताए ।...
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावलोकन यस्तो छ (पूर्णपाठसहित)
भक्तबहादुर शाही - March 30, 2021 0
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता खारेज गर्ने...
फास्टट्रयाकः प्रवेश विन्दुबाट कालोपत्रे
काठमाडौं । काठमाडौ–तराई/मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजना काठमाडौंतर्फको ‘जीरो प्वाइन्ट’ मानिएको खोकनामा जग्गा विवाद नसुल्झिएपछि नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको काम बाराको ‘जीरो प्वाइन्ट’ निजगढबाट...
बाँदरका लागि जङ्गलमै फलफूल खेती
तनहुँ। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–२ का श्यामलाल श्रेष्ठ बाँदर आतङ्कले हैरान छन् । बाँदरले खेतबारीमा आएर बाली खाइदिने गरेपछि उनी मात्र होइन, उमाचोकका अधिकांश कृषक...
एक सातामा १० अर्ब निक्षेप र कर्जा २८ अर्बले बढ्यो
काठमाडौं । चैतको दोस्रो सातासम्ममा २७ वाणिज्य बैंकको निक्षेप १० अर्बले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह २८ अर्बले बढेको छ । चैतको पहिलो साता...
ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको निर्णय झिकाउन आदेश
भक्तबहादुर शाही - March 29, 2021 0
काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय मगाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा...
‘भेरोसेल’ नेपाल आइपुग्यो
काठमाडौं । चीन सरकारले नेपाल अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आज आइपुगेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी–३३० जहाजबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’...
प्रदूषण उस्तैः कडा रोग निम्ताउन सक्ने विज्ञको चेतावनी !
काठमाडौं । केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न सहरमा देखिएको वातावरण प्रदूषणको उग्र रूपले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ । प्रदूषणको...
काठमाडौमा होलीको रंग (फोटोफिचर)
भक्तबहादुर शाही - March 28, 2021 0
काठमाडौं । रङहरुको पर्व फागुपूर्णिमा आइतबार पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ । सरकारले होलीमा सार्वजनिक विदा पनि दिएकाले घरमा परिवारसँग र घरबाहिर साथीहरुसँग आपसमा रङ...
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - April 17, 2021 0